Travel | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Aiza no misy an'i Qatar? Famaritana fohy momba ny fanjakana
Misy sokajin'olona iray izay tena tia amin'ny fitsangatsanganana. Miezaka hatrany izy ireo hitsidika ireo vaovaon'ny planeta. Misy toerana iray any an-danitra tokoa. Firenena kely nefa mahavariana antsoina hoe Qatar ity. Level ...
Loharano mafana Chundzha - toerana tokana hamerenana amin'ny laoniny ny fiainana
Betsaka ny toerana mahavariana sy tsy manam-paharoa ao Kazakhstan, izay azo antoka fa mendrika hitsidika mandritra ny fitsidihana ity firenena ity. Iray amin'ireo toerana ireo ny tanàna kely Chundzha. Amin'ny inona…
Ranomasin'i Azov: ny morontsiraka, ny toetrany, ny endri-javatra
Any amin'ny faritra atsinanan'i Eropa, any amin'ny faritra kontinanta antonony (faritra ivoana sy faritra iva) eo anelanelan'ny atsimon'i Ukraine, Russia andrefana ary ny faritra avaratry ny saikinosy Crimea, dia misy ny Ranomasin'i Azov. Ny morontsiraka, na ny ampahany aminy, ...
Miami, FL: manintona, sary. Holidays any Miami, FL
Androany dia mankeny an-tanànan'ny masoandro any Miami (Florida) izahay. Ity tanàna ity, toy ny fanjakana iray manontolo any Amerika, dia heverina ho faritra fandraisam-bahiny lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Natiora mahavariana, morontsiraka tena tsara, toetrandro mahafinaritra ary tantara manankarena, ...
Aiza no mandeha amin'ny ririnina any Moscou? Manao ahoana ny endriky ny renirano? Toerana sy toetran'ny tanàna
Betsaka ny olona tonga tsy tapaka eto an-drenivohitra hijery ny zava-manintona an'i Moskoa. Amin'ny ririnina, toy ny amin'ny fotoana hafa rehetra amin'ny taona, afaka mahita ireo ensembles malaza ao amin'ny Kianja Mena ianao, mitsidika ny Teatra Bolshoi sy ny hafa ...
Ahoana ny fandehanana avy any Salou mankany Barcelona? Inona ny halaviran-dàlana amin'i Salou mankany Barcelona ary ohatrinona ny sarany?
Salou no toeram-pialantsasatra malaza indrindra amin'ny Costa Dorada Espaniola. Izy io dia mety ho an'ny fianakaviana ary koa ny tanora mangetaheta adrenalinina sy ny mpifankatia. PortAventura Park dia goavana ...
Junior Suites: inona io?
Ny sasany amintsika dia matetika no nahita fehezanteny toy ny Junior Suites. Inona izany? Tokony ho fantatrao fa izany no anaran'ny iray amin'ireo sokajy efitrano ao amin'ny hotely. Isan-taona ny lazan'ny firenena vahiny ...
"Harmony of the Seas" - ny liner lehibe indrindra eto an-tany
Ny sambo fitsangantsanganana "Harmony of the Seas" no sambo lehibe indrindra manerantany ankehitriny. Ity goavambe kilasy oasis ity dia 362,12 metatra ny halavany ary 66 metatra ny sakany. Ny haavony ...
Ny rafitra Metro vaovao metro miaraka amin'ny ICR: Ho mora kokoa ve ny hifindra?
Ny Metro Mosko dia miova tsy tapaka. Amboarina ny gara sy ny zotra vaovao. Io dia ahafahanao mampifangaro ireo faritra samihafa ao an-tanàna sy eny ambanivohitra ho tambajotram-pitaterana tokana. Ny Metro dia mamela anao hiala haingana amin'ny faritra iray mankany ...
Fialamboly hafa: Vaovao amin'ny lalàna
Ny olom-pirenena miasa ao amin'ny Federasiona Rosiana dia manan-jo hanana fialan-tsasatra ara-dalàna mifanaraka amin'ny Lalàm-panorenana. Ny fepetra lehibe indrindra amin'ny fanomezana fialan-tsasatra an-tery dia fehezin'ny andininy 114-128 amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa ao amin'ny Federasiona Rosiana. Art. 122 dia miantoka ny zon'ny ...
Aquapark "Baryonyx": vidiny sy hevitra. Aquapark any Kazan "Baryonyx"
Ao Kazan, ianao dia afaka mahita toeram-pialamboly isaky ny tsiro sy teti-bola. Saika tsy mahazatra ny olona eo an-toerana ny fanontaniana hoe aiza no halehany amin'ny faran'ny herinandro. Sarotra kokoa ny misafidy izay haleha marina miaraka amin'ny fianakaviana iray manontolo. Iray amin'ny…
Aiza no hizaràna visa fanentanana amin'ny visa Schengen? Fitsipika vaovao hahazoana visa Schengen: fanontana an-doha
Manomboka amin'ny 14 septambra 2015, ny olom-pirenena rosiana dia tsy maintsy atao pirinty amin'ny rantsan-tànana hahazoana visa Schengen. Ny fandefasana angona biometrika dia tsy maintsy ataon'ny tsirairay. Ny fomba fanaovana ny fanaovana ny dian-tanan-tanana dia tanterahina ao amin'ny consulat, ivon-toerana ara-dalàna any Etazonia ...
Anapa - seranam-piaramanidina Vityazevo. Sary, adiresy, halavirana
Vityazevo dia seranam-piaramanidina iraisam-pirenena kilasy voalohany manana ny lanjan'ny federaly, miorina ao amin'ny Faritanin'i Krasnodar. Ny seranam-piaramanidina adiresy Vityazevo any an-tanànan'ny Anapa dia misaraka amin'ny dimy kilometatra miala ny gara Anapa (ny avaratry ny rivotra dia avaratra atsinanana), ary avy amin'ny ...
Ilmen (farihy): fialam-boly, fanjonoana ary fizahan-tany
Any amin'ny avaratra andrefana ny Lemak'i Eoropa Atsinanana no misy ny farihy Ilmen malaza sy tsara tarehy. Ny faritr'i Novgorod, ny faritra andrefana onenany, dia mifanila amin'ny tanin'i Pskov sy Tver ary mahasarika mpizahatany, mpanjono ary ...
Inona ny multivisa? Ahoana ny fomba hahatongavana any Schengen multivisa
Ny olona izay matetika mivezivezy any ivelany dia mila mahafantatra fotsiny hoe inona ilay multivisa. Ity dia antontan-taratasy fahazoan-dàlana miditra izay manome ny zo hiditra amin'ny faritry ny fanjakana vahiny im-betsaka tsy voafetra. Na eo aza ny…
Ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra eran-tany. Ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra ao Rosia. Ny seranana lehibe indrindra any Eoropa
Ny dia lavitra dia mitaky herinaratra betsaka, noho izany dia mitodika any amin'ny serivisy zotram-piaramanidina ny olona. Matetika, mpandeha iray no miatrika toe-javatra rehefa tara ny fiaramanidiny. Ary avy eo ny solontenan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia tsy maintsy manome sakafo ho an'ny mpanjifa, ...
Aleo hiresaka momba ny kilometatra maro avy any Rostov mankany Crimea
Ny fanontaniana amin'ny kilometatra firy avy any Rostov ka hatrany Crimea dia misy ifandraisany manokana amin'ny fisehoan'ny hetsika politika mikorontana any Okraina tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Ny saikinosy Krimea dia tafiditra tao amin'ny Rosiana ...
Inona no fiteny any Kanada: Anglisy na Frantsay?
Kanada dia fanjakana any Amerika Avaratra izay nampiray kolontsaina sy fiteny isan-karazany. Raha ny faritany misy azy dia laharana faharoa aorian'i Russia ny firenena. Ny fifandraisan'ny olana amin'ny tontolo maoderina Isan-taona dia tsy tonga eto akory ny olona ...
Bangladesh ... Firenena iza ity? Aiza no misy azy?
Bangladesy? Firenena iza ity? Aiza izy? " - ny fanontaniana toy izao dia re matetika matetika. Na izany aza, tsy ilaina ny maika ny hanameloka ireo liana amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra ara-jeografika. Manaiky, momba ny fanjakana kely toy izany azonao ...
Toby mariazy ao Moskoa: famintinana, fanamafisana ary fanamarinana ny mpizaha tany
Ny fampakaram-bady dia hetsika izay ankalazaina amin'ny ambaratonga lehibe. Na izany aza, tsy ny andro fampakaram-bady ihany no tokony ho manokana ho an'ny mpivady vao, fa koa ny alin'ny fampakaram-bady. Mitazona ny fotoana manetriketrika sy lavorary ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 38 Next Page
56 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,007.